Anyị debanyere aha Hotjar ma mee ụfọdụ anwale ule na peeji nke obibi anyi. Ọ bụ ezigbo ihu ọma peeji nke nwere otutu ngalaba, ihe, yana ozi. Ebumnuche anyị abụghị ichegharị ndị mmadụ - ọ bụ iji nye ụlọ ọrụ a haziri ahazi ebe ndị ọbịa nwere ike ịchọta ihe ha na-achọ.
Agbanyeghị etu esi debe saịtị gị nke ọma, otu esi hazie igodo gị, ndị ọbịa chọrọ ijikwa ahụmịhe nke ha ma chọọ nnukwu usoro nyocha iji chọta ihe m chọrọ. Ka anyị na ụlọ ọrụ na-ebipụta akwụkwọ oge niile na-arụ ọrụ, ịnwe usoro ọchụchọ siri ike na nke amamịghe bụ ihe dị mkpa. Ọ bụrụ na ị naghị eji a chọọ dị ka ọrụ ngwá ọrụ, ijide n'aka na itinye n'ọrụ nchọta ọchụchọ n'ime nyocha gị. Ka oge na-aga, ị ga-ejidekwa ụfọdụ ozi dị egwu na isiokwu ndị ọbịa gị na-achọ na ị mepụtaghị ọdịnaya maka.
Nke ahụ bụ eziokwu. N'ihi na mmebe ya ka mma na-egosi dị ka mauch mara mma n'ihi na ndị ahịa njikọ dị ka o kwere omume. Ọ bụghị mgbe niile ndị ahịa pịa maka "ụlọ ọrụ kacha mma" nke weebụsaịtị weebụsaịtị www.